Thola izinzuzo zomkhuba wokuhamba | Bezzia
Izinzuzo zomkhuba wokuhamba
USusana Garcia | 08/06/2021 20:00 | Ukuzivocavoca, Ezempilo
El ukuhamba umkhuba kungenye yezinto eziyisisekelo uma kuziwa ekuzivocavoca umzimba nsuku zonke futhi itholakala kuwo wonke umuntu. Kubukeka njengokuzivocavoca okulula kepha kusilethela izinzuzo ezinkulu okungenzeka ukuthi besingaziboni. Uma ufuna ukungena esimweni ngaphandle kokuzivocavoca okunzima noma iziyalo, ungajoyina umdlalo oyisisekelo kakhulu, umkhuba wokuhamba ngezinyawo.
Ukuhamba kuyinto okuthile cishe wonke umuntu angakwenza nsuku zonke, ngakho-ke ngumdlalo ongenazaba. Inezinzuzo eziningi ezikwenza sikhethe njengomunye wemidlalo ehamba phambili kuwo wonke umuntu. Ngaphezu kwalokho, kungenziwa noma singenayo imvelaphi enhle yezemidlalo, ngakho-ke kungaba umdlalo omuhle ukuqala ngawo.
1 Izinzuzo zokuhamba
2 Isiza ukugcina isisindo
3 Kunciphisa ukucindezeleka
4 Kuvikela amalunga omzimba
5 Ungenza kanjani umkhuba omusha
Ukuhamba umkhuba olula ongenziwa cishe yiwo wonke umuntu. Enye yezinzuzo zayo ezinhle kakhulu ukuthi akukho okukhethekile okudingekayo ukukwenza. Kuzofanele sikhethe kuphela izingubo ezintofontofo nezicathulo ezifanele. Izicathulo kuleli cala zibaluleke kakhulu, ngoba kufanele zikhululeke futhi zibe nokuxhunywa okuthile, yize kungenjalo kufanele kucaciswe ngokuqondene nezicathulo zokugijima noma eminye imidlalo ngoba umthelela mncane. Ngaphezu kwalokho, singakwenza nsuku zonke futhi kalula, ngaphandle kwenkokhiso kithi. Ungomunye wemidlalo eyisisekelo engenziwa futhi yingakho kwesinye isikhathi singakuqapheli, kepha ngaphandle kokungabaza ukuthi ngumdlalo okufanele uwucabangele.
Isiza ukugcina isisindo
Kubalulekile ukugcina isisindo esinempilo ngoba ukuba sesisindo sethu kunezinzuzo eziningi zezempilo. Ukuba nesisindo esingesihle kubi, kepha futhi ukukhuluphela ngokweqile, ngoba nakho kuvela izinkinga ezinjengokusakazeka kahle kwegazi emzimbeni, i-cholesterol noma izinkinga zenhliziyo. Ukuhamba kungumdlalo oyisisekelo kepha uma sikwenza usuku nosuku, ngejubane elihle, singakwazi ukugcina isisindo sethu kalula. Ngezinsuku lapho ungafuni ukwenza umdlalo obukhali ngokwengeziwe, hamba, ngoba kungenye indlela yokusebenza okulula kakhulu.
Ku Impilo yansuku zonke sinokucindezeleka okuningi okunqwabelene okungazuzisi, ngoba lesi simo esisemzimbeni wethu kufanele sisebenze ngesikhathi esifanele kuphela futhi njengamanje siphila esimweni sokuxineka unomphela, okunemiphumela emzimbeni wethu nasemasosheni ethu omzimba. Yingakho kubalulekile ukunciphisa ukucindezeleka. Ukuhamba nsuku zonke kusisiza wehlise amazinga okuxineka ngoba ukuzivocavoca kukhiqiza ama-endorphin futhi kusiphumuze Lokhu kwenza amasosha ethu omzimba aqine njengoba engathinteki yi-cortisol, i-hormone esiyikhipha ngezigaba zokuxineka.
Kuvikela amalunga omzimba
Umkhuba we ukuhamba kusiza ukuvikela amalunga omzimbanjengoba iqinisa amadolo nezinqe. Ukuzivocavoca futhi kuqinisa imisipha namathambo, yingakho kuzuzisa umzimba wethu. Ukuvivinya umzimba ngokulingene kuyadingeka kakhulu ukuze imizimba yethu ihlale ishesha futhi iqine kuyo yonke iminyaka. Ukugwema izinkinga zokuhlangana, imisipha namathambo kungatholakala ngokuvivinya umzimba ngokulingene.
Ungenza kanjani umkhuba omusha
Hamba nsuku zonke kungaba yindlela enhle yokuhlala uphilile. Umkhuba omusha kufanele wenziwe okungenani isigamu sehora ngosuku ukuze ubone izinzuzo zawo. Kufanele uhambe ngejubane elihle ukuze uthole izinzuzo ezinhle kakhulu, ngoba ukuhamba ngejubane elihle kukhuphula izinga lokushaya kwenhliziyo yakho nomzamo owenzayo. Kufanele uthole izicathulo ezinhle futhi ubheke izindawo ozozihambela ongazithokozisa, uguqule imizila. Singafaka ezinye ezinemithambeka ukuze sisebenze kakhulu ngokuzivocavoca umzimba.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Izinzuzo zomkhuba wokuhamba
Ukuthi umbango wamandla ubathinta kanjani laba abashadayo
Izinzuzo zokuqeqeshwa kokumiswa